नीरवको कथासङ्ग्रह ‘कोष्ठकभित्र हाँसो’ सार्वजनिक « News24 : Premium News Channel
नीरवको कथासङ्ग्रह ‘कोष्ठकभित्र हाँसो’ सार्वजनिक
काठमाडाैँ । साहित्यकार रोशन थापा ‘नीरव’ को कथासङ्ग्रह “कोष्ठकभित्र हाँसो” बजारमा आएको छ । आइतबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना भएको लोकार्पण समारोहमा डा. धुव्रचन्द्र गौतम, समालोचक महेश पौड्याल र अनुपमा रेग्मीले कथासङ्ग्रह विमोचन गरेका हुन् ।
पुस्तकको समालोचना गर्ने क्रममा अनुपमा रेग्मीले समग्र कथासङ्ग्रहभित्र समकालीन चेतना र उत्तर आधुनिकतावादी कथाहरू भएको बताएकी छन् ।
त्यसैगरि समालोचक महेश पौड्यालले कथासङ्ग्रहभित्रबाट केही संवाद वाचन गरेका थिए । उनले कथासङ्ग्रह नाटकजस्ता र उपन्यासजस्ता रहेको बताएका छन् । शीर्षकसँग कथा नमिल्ने भएकाले हृदयले भन्दा पनि मस्तिष्कले पढ्नु पर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेका डा. धुव्रचन्द्र गौतमले रोशन थापा ‘नीरव’ पछिल्लो समयको प्रयोगवादी लेखकमा आफ्नो दर्जा बनाइसकेको बताएका छन् । सात खण्डमा पाँचका दरले रहेका यस कथासङ्ग्रहभित्र जम्मा पैँतीसवटा कथा रहेका छन् ।
शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको यस सङ्ग्रहको मूल्य रू ४७५ रहेको छ ।
साहित्यकार बानिरा गिरीकाे निधन
काठमाडौँ । साहित्यकार डा. बानिरा गिरीको निधन भएकाे छ । उनकाे ७५ वर्षको उमेरमा हृदयघातका
भ्रष्टाचारी ! तँलाई मर्नु पर्दैन ?
कसरी सक्छस् बहिराे बन्न चीत्कार सबैकाे सुन्दा पनि तेरै कारण मृत शरीरकाे खातमा खात बन्दा
कवि एवं समालोचक मालीकाे निधन
काठमाडाैँ । कवि एवं समालोचक इन्द्र मालीको आज बिहान मुटुरोगबाट शहीद गंगालाल हृदय रोग प्रतिष्ठानमा
काठमाडौँ, १५ वैशाख । आख्यानकार दीपक प्याकुरेलको उपन्यास ‘उबर’ बजारमा आएको छ । डायस्पोरिक भावको